प्यूठानको दाखाक्वाडीमा रोकिएन श्रीखण्ड चोरी
शुक्रवार, फाल्गुन २१, २०७७
विप्लवसँगको वार्ता सकरात्मक : भट्टराई
सरकारले तीन वर्षमा के गर्‍यो ?
अझैपनि सूर्य चिन्ह कसको हो भनेर सोधिरहनुपर्ने विषय हो र ?
जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्न ‘उपाध्यक्ष कोसेली’ कार्यक्रम
जेष्ठ नागरिकको स्याहार गर्ने ‘छोरा बुहारी’ सम्मानित
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिको सदस्यमा माण्डवी गाउँपालिका अध्यक्ष नियूक्त
मन्त्री मणिले मागे माफी
शुक्रवार, माघ १६, २०७७ आजको पोष्ट
प्यूठान : प्यूठान नगरपालिका १ र २ मा रहेको बहुमुल्य प्रजातीको श्रीखण्ड चोरी अझै रोकिएको छैन् । दुई साता अघि चोरी भएको श्रीखण्ड चोरी बुधवार पूनः दोहोरिएको छ । स्थानीय गिर बहादुर धामीको २ वटा बोट, रोम बहादुर धामीको तीन वटा बोट, पित बहादुर धामीको चार वटा बोट, नारायण धामीको दुई वटा बोट र पूर्ण बहादुर धामीको दुई वटा बोट चोरी भएको छ । रातीको समयमा श्रीखण्ड चोरी भएको स्थानीय गिर बहादुर धामीले जानकारी गराए ।
दाखाक्वाडी श्रीखण्ड खेतीका लागि प्रख्यात ठाउँ मानिन्छ । स्थानीयले वर्षौदेखि यसको व्यवसायीक खेती गर्दै आएका छन् । स्थानीयका अनुसार प्रति किलो एक हजार रुपैयाँका दरले श्रीखण्ड विक्री हुँदै आएको छ । व्यवसायीहरु घरमै आएर श्रीखण्ड लैजाने गरेको स्थानीयले बताए ।
रोल्पा र नेपालगञ्जका व्यवसायीहरु घरमै आएर श्रीखण्ड खरिद गर्दै आएपनि रातारात चोरी बढ्दै जाँदा स्थानीय निराश भएका छन् । चोरी गर्ने गिरोह खोजी गरी कारवाहीका लागि स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय विजुवारमा लिखित उजुरी दिएका छन् । यहाँका करिव तीन सय घरधुरीले यसको व्यवसायीक खेती गरिहेका छन् । प्रत्येकका घर घरमा चार÷पाँच वटा श्रीखण्डका बोटहरु छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, माघ १६, २०७७, ०६:५५:५३
खानेपानी मन्त्रीको विशेष चासो : स्वर्गद्धारीमा माडीको पानी ल्याइने
मुख्यमन्त्री राइको विवाह हुँदै
मणी थापाको चर्चा पर्यटन, नियूक्त खानेपानी मन्त्री
प्यूठानका मणी थापा पर्यटनमन्त्री बन्दै
शुक्रवार, पुष १०, २०७७ आजको पोष्ट
भिजिविलिटी नपुग्दा भैरहवा–काठमाण्डौँ उडान ठप्प
शनिवार, पुष ४, २०७७ आजको पोष्ट
विप्लवसँगको वार्ता सकरात्मक : भट्टराई बुधवार, फाल्गुन १९, २०७७ 89
मन्त्री मणिले मागे माफी आजको पोष्ट
प्यूठानको दाखाक्वाडीमा रोकिएन श्रीखण्ड चोरी आजको पोष्ट
खानेपानी मन्त्रीको विशेष चासो : स्वर्गद्धारीमा माडीको पानी ल्याइने विनोद खड्का
सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियन्ता खड्का सम्मानित बुधवार, माघ १४, २०७७
सम्पदा र झिमरूक मंगलवार, कार्तिक २५, २०७७
सम्झौतामा बिहे सोमवार, कार्तिक १७, २०७७
विप्लवसँगको वार्ता सकरात्मक : भट्टराई बुधवार, फाल्गुन १९, २०७७
सरकार र विप्लवबीच वार्ता शुरु बुधवार, फाल्गुन १९, २०७७
सरकारले तीन वर्षमा के गर्‍यो ? सोमवार, फाल्गुन ३, २०७७
अघोषित लोडसेडिङ नगर्न विद्यार्थी संगठनको ध्यानाकर्षण
सोमवारदेखि आन्तरिक उडान सूचारु
बनिरहेको पुलका सामग्री बाढीले बगायो
केशर बहादुर रोका